နှစ်ချက်အစားထိုးတုံ့ပြန်မှု - စာမျက်နှာ4| ဓာတုဓာတ်ပြုမှုညီမျှခြင်း
နှစ်ချက် - အစားထိုးတုံ့ပြန်မှု - စာမျက်နှာ 4
အိုင်းယွန်းဒြပ်ပေါင်းနှစ်မျိုး၏အပေါင်းနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာအိုင်းယွန်းများဖလှယ်သည့်နေရာတွင်ဒြပ်ပေါင်းအသစ်နှစ်မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ - ၂၀၂၁ ပြင်ဆင်သည်
AB + CD ကို→အေဒီ + CB
A နှင့် C သည်ဤတုန့်ပြန်မှုတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအားသွင်းဓာတ်ပြုပြီး၊ Double- အစားထိုးတုံ့ပြန်မှုပုံမှန်အားဖြင့်ဒြပ်ပေါင်းများအကြား aqueous ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်စေရန်ထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုသည်များသောအားဖြင့်အစိုင်အခဲမိုးရွာသွန်းမှု၊ ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ရေကဲ့သို့မော်လီကျူးဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ် ဦး ကဓာတ်ပေါင်းဖိုမှဘိလပ်မြေအခြားဓာတ်ပေါင်းဖိုကနေ anions နှင့်အတူပျော်ဝင် ionic ဒြပ်ပေါင်းဖွဲ့စည်းရန်ပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာတစ် ဦး ကမိုးရွာသွန်းမှုကို double- အစားထိုးတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ပိုတက်စီယမ်အိုင်အိုဒင်းနှင့်ခဲ (၂) နိုက်ထရိတ်အရည်ပျော်သောအခါအောက်ပါတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်သည်။
Cr + 2HCl →ဖြစ်သည် H2 + CrCl2
Nhiệtđộ: 1150-1200 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Phương trình နံပါတ် ၁
4Cr + 12HCl + O2 → 2H2 + 2H2O + 4CrCl3
Cr + 3NaNO ဖြစ်သည်3 + 2NaOH → H2O + 3NaNO ဖြစ်သည်2 + Na2CrO4
ကိုး 347 kảquả ìctìmthấy - Hiểnthịkếtquảtừ 10 .n 12
သင့်ရဲ့ရေအားလျှပ်စစ်။ အီလက်ထရွန် duy nhấtအီလက်ထရွန် duy nhấtဤသည် uyn giảnnhấtဒီ bao gồmmộtပရိုတွန် trong hạtnhân quc quay quanh bởiအီလက်ထရွန် duy nhất။ Hydro သည်nguyên th nhẹnhất trong s cac c nguyêntàvà ph lh nhất trong vũtrụ။
heli tht thúvịvề
ဧလိ La một Mat Hang Cong nghiệp CO nhiều Cong Dung Quan trong Hon Bong Bong tiệc Tung VA khiếngiọngnóicủa Ban ခြင်း Myanmar nên vui Nhon ။ ဤရွေ့ကား, ဤအရာမှဤခရီးစဉ်, ဤရွေ့ကား, မရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, tênlềaiềuápvácáctàuvũ trh khác, hihing cứuạônglạnh, laser, cúm h k k ảảảảảảảả MRI သည် n ch n nâh v v v v v M M M M M M M M M MRI MRIRIRI ဤအမှုအရာသည်ဟီလီဟီဟင်၊ ဘာသာပြန်ချက်မဟုတ်သည်။
လီသီယမ်သည်အမ်ဘီအမ်သတ္တုဓာတ်ပါဝင်သည်။ BigBang သည် Lithium làmột trong ba nguyêntố rac သည် ra ra trong ba nguyên! Lithium - အဘယ်သူသည်များစွာသော 20 thựtthúvịnguyêntốလီသီယမ် - m kimt kim loạituyệtvời!
Berili S thậtthúvịvề
Berili (Be) သည်4proton trong4သို့ XNUMX ပရိုတွန်ပမာဏကိုရယူရန်မဟုတ်ပါ။ Kim loạkiềmthổnàychỉxảy ra ựnhiênvớicácnguyênốkhác trong cáchợpchất။